Mogadishu Journal » Al-Shabaab oo xalay weerar culus ku qaaday Qoryooley
Al-Shabaab oo xalay weerar culus ku qaaday Qoryooley
Mjournal :-Al-Shabaab ayaa xalay mar kale weerar culus ku qaadan saldhig ciidamada dowladda ku leeyihiin duleedka degmada Qoryooley ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Dagaal culus ayaa labada dhinac dhex maray, iyagoo isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, sida dadka deegaanka soo wariyeen.
Ciidamada dowladda ayaa la sheegay in gurmad soo gaaray ay ugu suura gashay inay iska caabiyaan weerarka Al-Shabaab.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose oo ku sugan Qoryooley ayaa sheegay in labo askari ay ciidanka kaga dhaawacmeen dagaalka, sidoo kale waxaa jira dhimashada hal qof oo rayid ah iyo qof kale oo dhaawac.
Waa weerarkii labaad oo Al-Shabaab ku soo qaadaan Qoryooley, iyadoo labo cisho ka hor ay aheyd markii sidan oo kale Al-Shabaab soo weerareen fariisimaha ciidamada dowladda.
Al-Shabaab ayaa kordhiyay weerarada ay ka geysanayaan deegaanada Gobolka Shabeellaha Hoose ee horay looga saaray, waxaana ay u muuqdaan in culeysyo aan horay u jirin u soo saareen deegaanada Gobolka sida degmada Qoryooley.
Madaxweyne Farmaajo oo mar kale ku guul dareystay qabashada shir uu ku baaqay